Sideen u soo ceshan karaa fariimaha Telegram - VidaBytes | LifeBytes
Waxaan hubaa inay waligeed kugu dhacday Taleefankaagii waad beddeshay, ma haysan kayd kayd ah oo waxa aad lumisay kaliya ma aha wada-sheekaysigii telegram-kaaga, laakiin dhammaan faylasha la wadaago iyaga. Marar badan, ma siino muhiimadda ugu weyn, laakiin marka wada-hadalladan ay ku jiraan shaqada ama xogta shakhsi ahaaneed ama dukumentiyada, arrimuhu way adkaadaan.
Ha welwelin, waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno dhibaatadan. Waxaan ku siin doonaa tallaabooyin taxane ah iyo talooyin aad raacdo si aad uga soo kabsato fariimaha akoonkaaga Telegram, iyo sidoo kale xogta iyo dukumentiyada muhiimka ah.
Haddii dhanka kale, aad tahay qofka arjiga ka tirtirayay sheeko shaqsiyeedka mid mid oo hadda aad rabto in aad soo ceshato, sidoo kale waad awoodi doontaa. Telegram, wuxuu ku siinayaa suurtogalnimada inaad si joogto ah u tirtirto fariimaha ama taariikhda la sheekeysto adoon ka tagin raad. Xataa fariimahan aan u dooranay inaan ku tirtirno waxay awoodi doonaan inay soo ceshadaan iyaga. Joog oo waanu sharaxi doonaa sida.
1 Waa maxay codsiga Telegram?
2 Sida loo soo ceshado fariimaha Telegram
2.1 ka noqo badhanka
2.2 Fariimaha lagu kaydiyay Telegram
2.3 Hubi kaydka qalabkaaga
3 Sida loo kaydiyo Telegram
Waa maxay codsiga Telegram?
Telegram, waa a Codsiga fariimaha deg dega ah ee loo heli karo qalab kala duwan sida Windows, MacOs iyo Linux, iyada oo aan la iloobin Android iyo IOS. Waxaa si dhab ah loo heli karaa dhammaan aaladaha aan isticmaalno maalinteena maalinlaha ah. Waxaa jira kuwa isbarbar dhigaya codsigan iyo WhatsApp, sababtoo ah isku mid ahaanshaha iyo in ay dhab ahaantii leeyihiin ujeedo isku mid ah.
Mid ka duwan midka kale ayaa ah in Telegram-ka uusan u baahnayn qalab mobile ah oo uu ku shaqeeyo. Waad ku mahadsan tahay tan, sirta ah ee dhammaan isticmaaleyaasheeda waa la xakameynayaa. Sidoo kale, qodobka togan waa taas macluumaadka lagu wadaago wada sheekeysiga waxay ku kaydsan yihiin server-yada Telegram-ka oo aan ku jirin qalabka.
Sida loo soo ceshado fariimaha Telegram
Qaybtan aad isku aragto, waxaad ka heli kartaa habab kala duwan oo aad ku heli karto ka soo kabsado la tirtiray ama lumay wada sheekaysiga Telegram iyo faylasha.
ka noqo badhanka
Appka Telegram, kuu ogolaanayaa inaad ka noqoto wixii aad tirtirtay, ula kac ama aan ku talagal ahayn. Maskaxda ku hay in ay tahay in aad samayso habkan wakhtiga ugu yar ee suurtogalka ah marka aad tirtirto fariimaha wada hadalka.
Markaad go'aansato inaad gabi ahaanba tirtirto sheekeysiga, waxaad arki doontaa a ikhtiyaarka leh suurtagalnimada in ficilkaas laga noqdo dhowr ilbiriqsi oo keliya. Haddii aad riixdo badhanka dib u dhigista, waxaad awoodi doontaa inaad ku soo ceshato wax kasta ilbiriqsiyo, fariimo iyo faylal la'aan dhibaato la'aan.
Waxa kaliya oo aad samayn kartaa habkan wakhtigaas wakhtiga ah kaas oo codsigu ku tusayo suurtogalnimada hoose ee shaashadda, waxa aad haysataa wakhti lagu qiyaasay ilaa 5 ilbiriqsi.
Haddii ay dhacdo in aad tirtirto fariinta wada sheekaysiga shakhsi ahaaneed, waxaad heli doontaa xal yar. Si kastaba ha ahaatee, markaad diyaar u tahay inaad wax ka saarto codsiga, tani waxay ku weydiin doontaa dhowr jeer haddii aad runtii rabto inaad tirtirto waxyaabahaas oo kale, haddii ay sidaas tahay, kaliya waa inaad aqbashaa oo aad sugtaa inta laga saarayo.
Fariimaha lagu kaydiyay Telegram
Hubaal, in ka badan hal mar waxaad kaydisay fariimaha adigoon ogayn. Appkan fariimaha ah, Waxa ay leedahay gal gudaha ku dhex jira oo ay ku kaydsan yihiin fariimaha aad kaydisay oo aad isticmaali karto wakhti kasta.
Qaar badan oo ka mid ah isticmaaleyaasha Telegram-ka ayaan ka warqabin galkan sirta ah waxayna aaminsan yihiin inay lumiyeen fariimahoodii. Uma baahnid inaad mar dambe ka walwasho, fariimahaas lama lumin, laakiin waa la kaydiyay oo waxaad awoodi doontaa inaad hesho, hadda waxaan kuu sheegaynaa sida aad u soo kaban karto.
Si aad u gasho, waa inaad furto codsiga fariimaha. Marka xigta, u gudub dhanka bidix ee sare ee shaashadda, halkaas oo aad geli doonto daaqada profile kaaga. Kadib dooro magacaaga iyo lambarkaaga, ka eeg isticmaalekaaga app-ka. Gudaha Astaanta muraayadda weynaynta ee ka soo muuqata shaashadda sheekada, ku qor magaca isticmaalaha oo si toos ah, Telegram, ayaa ku tusinaysa galka fariimaha la kaydiyay.
Hubi kaydka qalabkaaga
Haddii ay dhacdo in aad lumiso ama tirtirto faylka, ha ahaato multimedia ama qoraal, oo aad rabto inaad dib u soo ceshato, waa inaad raacdaa tallaabooyinka soo socda. Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad u tagto maamulaha faylka qalabkaaga gacanta. Ka raadi faylka ku hoos jira magaca qalabkaaga, haddii ay tahay Android, galku wuxuu yeelan doonaa magac isku mid ah.
Marka la helo, dooro, gal iyo waxa ku jira. Gudaha, waxaad ka heli kartaa faylal kala duwan halkaasoo dhammaan kaydinta codsiyada lagu rakibay aaladahaaga ay ku kaydsan yihiin. Hel faylka ku hoos jira magaca Telegram, oo gal dhammaan faylasha la wadaagay codsiga oo hel mid aad si qalad ah u tirtirtay.
Sida loo kaydiyo Telegram
Habkan badbaadinta ayaa xoogaa ka duwan waxa aan u isticmaalnay in aan ku aragno WhatsApp. Codsiga Telegram wuxuu leeyahay a qalab noo ogolaan doona in aan ku kaydiyo dhammaan xogta wada sheekaysiga our kumbiyuutarka gaarka ah.
Si aad awood ugu yeelatid inaad u dhoofiso sheekeysiga aan ku furnay Telegram-ka, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato waa inaad leedahay ku rakibay codsiga miiska qalabka. Marka aad rakibto, kaliya waxaad haysataa gal lambarkaaga mobaylka oo geli koodka kaas loo soo diray mid ka mid ah aaladahaaga, badiyaa mobilka.
Markaad furto app-ka kumbuyuutarkaaga, waxaad gujin doontaa liiska ka muuqda qaybta bidix ee sare ee shaashadda, oo loo yaqaan menu hamburger. Marka la gujiyo, menu ayaa soo baxaya oo waxaad raadin doontaa ikhtiyaarka dejinta.
Markaad gujiso goobaha, daaqad pop-up ayaa soo baxaysa oo leh doorashooyin kala duwan. Dhammaan xulashooyinkaas, waa inaad doorataa midda horumarsan. Mar labaad, shaashad cusub ayaa furmi doonta halkaas oo aad dooranayso "Export data from Telegram" doorashada, gudaha qaybta "Data and storage".
Sida mararka qaarkood dhacda marka la samaynayo gurmad, Waa inaad u fiirsataa dhammaan xulashooyinka laguu soo bandhigay., maadaama ay ku xiran tahay inaad doorato mid ama mid kale, nuqulkani wuxuu noqon doonaa mid ka badan ama ka yar dhammaystiran.
Sida aad ku arki karto sawirka, waxaa jira fursado badbaadineed oo kala duwan, kaliya kuwa gaarka ah ama kuwa gaarka ah, kooxaha gaarka ah ama kuwa guud, cabbirka faylka, iwm. Marka aad haysato wax walba oo koobiga la dhammeeyo, dhammaan faylasha waxa lagu kaydin doonaa galka la soo dejiyo Hoosta magaca "Telegram Desktop".
Xusuusnow in haddii aysan jirin gurmad, ma awoodi doontid inaad dib u soo ceshato wada sheekeysiga, ama farriimaha la tirtiray ama faylasha badan. Waxaan rajeyneynaa in talooyinkan aasaasiga ah ee ku saabsan sida loo soo kabsado fariimaha Telegram ay ku caawin doonaan. Haddii ay dhacdo mid ka mid ah kiisaska la daweeyay ay kugu dhacaan, horay ayaad u garanaysay sida loo dhaqmo.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Aplicaciones » Sideen u soo ceshan karaa fariimaha Telegram